About Us - Foshan Fumei toerana ipetrahana Co., Ltd
Ny orinasa manana matihanina, kalitao avo-fitantanana sy ny fampandrosoana mpiasa. Izy ireo manokana sy ny fiantohana ny fanatsaràna ny vokatra tsara, fanavaozana ny vokatra sy ny famolavolana ny fomba hahatonga ny orinasa handeha lavitra kokoa. Dia ho azo antoka fa ny vokatra rehetra dia halefa ho any amin'ny mpanjifa manara-penitra raha vao araka izay azo atao.
Manana sampana ao an-toerana ny sasany Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou, Liaoning, Ha'erbin, Jilin, Shandong, Zhengzhou, Suzhou, Fujian, Wuhan sns ihany koa ny fanondranana ny vokatra tany Amerika, Aostralia, Rosia, Afovoany Atsinanana, Afrika, Atsimo Azia atsinanana ary ny sasany firenena hafa.
Mijanona mifantoka amin'ny ankehitriny, ary miandry ny ho avy isika, dia feno fahatokiana sy hanorina maharitra fampandrosoana drafitra mba amim-pahatsorana manantena ny hiara-miasa amin'ny namana manerana izao tontolo izao, mba hahazoana ny fandresena-fandreseny faniriany ho an'ny anao sy ho ahy . Isika no mamaritra ny hiara-miasa amin'ny baovao sy ela ny mpividy mba hamoronana ny taonjato-antitra fototra sy marani-tsaina ho avy.